Maitiro Ekuvandudza Ari Kuuraya Kambani Yako | Martech Zone
Chitatu, November 17, 2010 Mugovera, October 29, 2011 Douglas Karr
Manheru ano ndanga ndiri muhurukuro inopisa pamwe nemudzidzisi wangu. Hazvishamise kuti ini ndakatsamwa ... kwete chipangamazano;). Pakati penhaurirano pakanga paine kambani yatinofarira tese. Kunetsekana kwangu nekambani ndeyekuti ndivo kwete kununura pane chivimbiso chemhinduro yavo. Nharo yake ndeyekuti anotenda kuti vese vari vaviri innovative uye ndakabudirira kutora ziso revakuru vanokurudzira muindasitiri.
Kugadziridza kwakanaka kwakanyanyisa. Chinangwa chako hachifanirwe kunge chiri innovative, chinangwa chako chinofanirwa kunge chiri kosha. Vhidhiyo: Kubva 37 Zviratidzo, Jason Akabikwa paInnovation
Ini ndinobvuma nemoyo wese.
Musoro wako usati waputika… uchibatsira anogona iva mutsva. Asi kuve nehunyanzvi hazvireve kuti ndizvo zvazviri kosha. Iyo kambani yatiri kutaura nezvayo ndeye zvemukati manejimendi sisitimu iyo inoita kutsikisa uye kuronga zvemukati zvive nyore pamwe nekugadzirisirwa kutsvaga injini. Iri ibwe rakasimba chikuva chine chinoshamisa zvigadzirwa. Kanda timu yevanyori vezviri pairi uye ivo vanokwanisa kushambadzira zvisina basa.
Dambudziko nderekuti, kazhinji, zvirimo ndezve isina kugadziridzwa. Zvakapesana zvakanyanya, kune mamwe mahombe muhombe mukugadzirisa izvo zvinoderedza mikana yezvinyorwa kuti zvinyorwe zvakanaka neinjini dzekutsvaga. Mune mamwe mazwi, chikuva chiri hazvibatsiri.
Murairidzi wangu akabvuma kuti ivo vanonetsekana kana vakaiswa mukamuri nevarume veSEO vanobva kumakambani. Chokwadi vanoita! Nei achishamisika? Kana iwe uchinge uchirasikirwa nezvimwe zvekutanga zvekugadzirisa chikuva chako, iwe ucharasikirwa nekutengesa kune yemukati SEO mukomana nguva dzese. Uye ivo vanofanirwa.
Iko kukoshesa kwekambani kwave kuri nezve inotevera Internet celeb yekugamuchira webinar, mutungamiri weindasitiri kuti asangane naye, munyori kusimudzira bhizinesi, anokurudzira kubhadhara, kana chinhu chitsva kune wow tarisiro. Mune maonero angu akatendeseka, ndinotenda ese maitiro aya kupambadza nguva, simba uye… pakupedzisira… mari. Ini ndinofunga kambani irikuitira vatengi vavo zvisizvo ... uye vachiibhadhara. Ivo havasi kurarama zvinoenderana nekutarisira kwavakaisa mukutengesa maitiro… izvo zvavaive kosha.
Nekuda kweizvozvo, kambani yavo haisi kukura pachiyero chevamwe vatano vane hutano. Zvakapesana neizvo, zvikwata zvavo zvekutsigira zvinoshungurudzika, kuwedzerwa kwevashandi kwave kwakakwirira, uye kuchengetwa kwavo kuri kutambura. Kuburitswa kwese kunounza zvimwe zvinhu zvitsva zvinounza matambudziko nyowani nematambudziko.
Izvi zvese zviri kutungamira kune mukurumbira wekambani iri panjodzi. Ndave kuzeza kusundidzira makambani kuchikuva kunyangwe ini ndichiona zvisingaite mukana mukambani. Kana vachinge vadzokera ku kosha, Ini handina mubvunzo kuti vachaputika mukukura.
Parizvino, zvakadaro, hunyanzvi huri kuvauraya.
Sanganisa Yenyu Yekubatsira neTwitter